Iimilo abavelisi kunye nababoneleli - iQela lokuSebenza lokuSebenza okuMnyama eChina
Ixabiso eliphantsi leZebra Blinds Ilaphu ngombala oPileyo
Ilaphu le-Zebra Blinds
Ilaphu le-Zebra eliyimfama liyaziwa njengelaphu eliyimfama, ilaphu eliyimfama, ilaphu eliyimfama elifihliweyo, kunye nelaphu eliphindwe kabini le-roller okanye ilaphu eliyimfama, elivela eMzantsi Korea kwaye laziwa kakhulu kwihlabathi liphela. Olu hlobo lwelaphu aludibanisi kuphela izibonelelo zelaphu kunye nemingxunya, kodwa ikwahlanganisa imisebenzi yeemfama ze-venetian, i-roller blinds kunye ne-blinds zaseRoma. iindawo.
Xa kuthelekiswa ne-zebra eyimfama eyimfama kwintengiso, ukubonakala kweqela leQwarhashe eliyimfama lilunge ngakumbi, kwaye umsebenzi ulula ngakumbi.
I-China Decor yabucala Ilaphu le-Zebra eliyimfama kwi-Window yeOfisi yeOfisi
Ilaphu leZebra Blind
Iimfama zeZebra, ezaziwa ngokuba ziimfama zomnyama, iimfama ezimfiliba, iimfama ezihamba ngambini, iimini zasemini nasebusuku, njl. Ububanzi beqwarhashe lewindow eyimfama eyimfama ilinganisa i-3m, kwaye izinto ziyi-100% ipholiyesta.
3. Sebenzisa ilaphu elithambileyo okanye isiponji esimanziswe ngamanzi afudumeleyo ukosula amakhethini ngexesha lokususa uthuli. Ukuba kukho imfuneko, kunokufakwa iisepha ezinobulali. Sula ngobunono ukuthintela ukushwabana okanye ukonakalisa ilaphu. Ukusula kungenza ikhethini icoceke.
4. Sebenzisa isinyithi somphunga ukutshiza kwindawo emalunga ne-10 cm kude kwikhethini yelaphu, enokuba nefuthe lokususa / ukuvala inzala.
I-China Factory yokuThengiswa kweZebra Blinds Ilaphu ngeXabiso loKhuphiswano
Ilaphu le-Zebra eliyimfama liyaziwa njengelaphu eliyimfama, ilinen elimnyama eliyimfama, ilaphu lokufiphaza i-roller, kunye nelaphu eliphindwe kabini le-roller. Luhlobo lwelaphu elilukiwe kwisiqwengana selaphu esinobubanzi obulinganayo kunye nomnatha ohlukanisiweyo omnye komnye.
Xa kuthelekiswa ne-zebra eyimfama eyimfama kwintengiso, ukukhanya okulungelelanisiweyo kuluncedo olukhulu kwiQela leZebra Blinds Fabric, enokuhlangabezana neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokukhanya, kwangaxeshanye, imbonakalo nayo ilungile, kwaye nokusebenza kulula.
Emini nasebusuku Amacwecwe amabini aBucala boMthunzi weKhaya laseKhaya
Ilize Shades Ilaphu
I-Sheer shades, ekwabizwa ngokuba ziimfama ze-zebra, iimfama ezimfiliba, iimfama ezihamba ngambini, iimini zasemini nasebusuku, iimfama zothingo, njl. Isetyenziswa ngokubanzi emakhayeni, kwiihotele, kwiivenkile zokutyela, kwiivillas, kwizakhiwo ezisezikhundleni eziphezulu zeofisi nakwezinye iindawo.
Isitayile saseYurophu iRainbow Blinds Fabric 100% yePolyester
Ilaphu le-Rainbow Blinds
Iimfama ze-Rainbow, ezaziwa ngokuba ziimfama ze-zebra, iimfama ezimfiliba, iimfama ezihamba ngambini, iimini zasemini nasebusuku, njl.
Njengoko sonke sisazi, ifuthe lokufiphaza ilinen eliyimfama kwilaphu ikakhulu limiselwe ngumbandela. Ngokutsho kweempawu zelaphu, linokwahlulwa libe ngumnyama omnyama omnyama oyimfama kunye nelanga elimnyama eliyimfama.
Ukukhethwa kwempembelelo ye-shading kugqitywe ngokukodwa ngokwemeko esetyenzisiweyo. Nokuba ungaluphi na uhlobo oludingayo, singanikezela ngeyona ngcebiso kunye neesampulu ezilungileyo.
Ifektri eshushu yokuthengisa Dual Sheer Roller Blinds Ilaphu yeOfisi
I-Sheer Roller Blinds Ilaphu
I-Sheer roller blinds, ekwabizwa ngokuba ziimfama ze-zebra, iimfama ezimfiliba, iimfama ze-roller, iimini zasemini nasebusuku, iimfama zomnyama njl. Isixhobo se-roller se-blinder fabric 100% ipholiyesta.
Ayinakho ukuphumeza kuphela ukusebenza kwe-shading, kodwa ikwahlangabezana neemfuno zokukhanyisa xa abantu besebenza. Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo.Sinezinto ezingaphezu kwama-200 kwinto yethu eyimfama eyimfama eyimfama eyimfama eyimfama, ungafumana imibala efanelekileyo kuyo.
Imigangatho ephezulu yoSuku kunye noBusuku obuvala iimpahla 100% yePolyester
Imini nobusuku Blinds Ilaphu
Imini nobusuku bokumfamekisa ilaphu kwaziwa njengelaphu le-zebra eliyimfama, ilaphu eliyimfama, ilaphu eliyimfama, ilinen eyimfama eyimfama, kunye nelaphu elingaphezulu elileloumfama nelaphu elingaphezulu.
Imini nobusuku obuyimfama ziimfama ezimbini. Ukufiphala kwayo kufezekiswa kukudibanisa umaleko welaphu kunye nocingo lwengca. Xa ulungelelwaniso lwe-mesh ludibana, ukukhanya kuthambile kwaye ukukhanya ngokuthe ngqo kuncitshisiwe ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Xa izambatho zelaphu zihamba, ukukhanya kuvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ekugqibeleni kuthintele ukukhanya. Yonke imini nobusuku bokumfamekisa ilaphu lenziwe nge-100% ipholiyesta, kwaye sinezatifikethi zawo onke amalaphu.
Ireyithi yokusetyenziswa ephezulu yeZebra Shade Ilaphu 100% yePolyester
Ilaphu leZebra Shade
Ilaphu leZebra Shade liyaziwa njengelaphu eliyimfama, ilinen elimnyama eliyimfama, ilaphu elityhaphazelayo liyimfama, kunye nelaphu eliphindwe kabini lokwenza amakhethini okanye amalaphu angama-roller. Ngokweempawu zelaphu, linokwahlulwa libe lilaphu leqwarhashe elimnyama kunye nelaphu le-zebra emnyama.
Isetyenziswa ngokubanzi emakhayeni, kwiihotele, kwiivenkile zokutyela, kwiivillas, kwizakhiwo ezisezikhundleni eziphezulu zeofisi nakwezinye iindawo. Kwindawo evulekileyo efana negumbi lokuhlala kunye negumbi lokufundela, ukuba iimfuno zokufiphaza aziphezulu kangako, unokukhetha i-zebra blinds. Ukuba ligumbi lokulala okanye igumbi lokubonwayo elifuna ukufiphazwa okuphezulu, unokukhetha i-zebra emnyama.
Inemvakalelo yomelele-ntathu kwaye ifudumele kakhulu. Xa iimfama zivuliwe, unokujonga indawo yangaphandle kwaye ukukhanya okungena kwigumbi kuthambile kwaye kukhululekile.
Xa ikhethini livaliwe, lizimele lodwa ngaphandle, liqinisekisa ukuba ngasese kwaye libonisa ukuqaqamba nobuhle bemfama yomnyama.
Ilaphu lethu lokumfamekisa komnyama lelona khetho lifanelekileyo kumzi-mveliso weemfama okanye iivenkile ezinkulu. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla zamalaphu amnyama omnyama kubathengi bethu. Kwaye umqulu ngamnye wobumnyama obuyimfama kwilaphu kufuneka uphumelele uvavanyo lomgangatho ngaphambi kokuhambisa.
Ilaphu leZebra enemibala emininzi 100% yePolyester yeeVillas
Ilaphu leZebra liyaziwa njengelaphu eliyimfama, ilinen elimnyama eliyimfama, ilaphu elifiphaza amalaphu amnyama, kunye nophahla oluphindwe kabini lokumfamekisa ilaphu. Ngokweempawu zelaphu, linokwahlulwa libe lilaphu leqwarhashe elimnyama kunye nelaphu le-zebra emnyama.
Kwindawo evulekileyo efana negumbi lokuhlala kunye negumbi lokufundela, ukuba iimfuno zokufiphaza aziphezulu kangako, unokukhetha i-zebra blinds. Ayinakho ukuphumeza kuphela ukusebenza kwe-shading, kodwa ikwahlangabezana neemfuno zokukhanyisa xa abantu besebenza. Ukuba ligumbi lokulala okanye igumbi lokubonwayo elifuna ukufiphazwa okuphezulu, unokukhetha i-zebra emnyama. Nokuba ukhetha ukukhetha eyiphi, sinokunika ezona ngcebiso kunye neesampulu ezilungileyo.
Iimfama ze-Rainbow, ezaziwa ngokuba ziimfama ze-zebra, iimfama ezimfiliba, iimfama ezihamba ngambini, iimini zasemini nasebusuku, njl. Luhlobo lwelaphu elilukiwe kwisiqwengana selaphu esinobubanzi obulinganayo kunye nomnatha ohlukanisiweyo omnye komnye. Inemvakalelo yomelele-ntathu kwaye ifudumele kakhulu. Impahla yomnyama eyimfama eyilaphu yi-100% ipholiyesta.
Xa kuthelekiswa nobuninzi bemfama eyimfama emarikeni, ukukhanya okulungelelanisiweyo kuluncedo olukhulu kwiQela leZebra Blinds Fabric, enokuhlangabezana neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokukhanya, kwangaxeshanye, imbonakalo nayo intle, kwaye nomsebenzi ulula.
Isiqinisekiso soMgangatho weLaphu leZebra elihlala ixesha elide li-100% lePolyester Semi-Blackout
Ilaphu le-Zebra eliyimfama liyaziwa njengelaphu eliyimfama, ilinen elimnyama eliyimfama, ilaphu lokufiphaza i-roller, kunye nelaphu eliphindwe kabini le-roller. Ngokweempawu zelaphu, linokwahlulwa libe lilaphu leqwarhashe elimnyama kunye nelaphu le-zebra emnyama.
Ayidibanisi kuphela izibonelelo zelaphu kunye nemingxunya, kodwa ikwahlanganisa imisebenzi yeemfama ze-venetian, i-roller blinds kunye ne-blind yaseRoma. Isetyenziswa ngokubanzi emakhayeni, kwiihotele, kwiivenkile zokutyela, kwiivillas, kwizakhiwo ezisezikhundleni eziphezulu zeofisi nakwezinye iindawo.